स्वास्थ्यका लागि उखु कति उपयोगी ? | News Dainik
स्वास्थ्यका लागि उखु कति उपयोगी ?
News desk १० भाद्र २०७६, मंगलवार ०८:३६ समाचार, स्वास्थ्य प्रतिकृया दिनुहॊस
काठमाडाैं । उखुले ऊर्जा दिने, स्फूर्ति बढाउने, रगतमा ग्लुकोजमो मात्रा कायम राख्नेजस्ता काम गर्छ। तर फाइदा हुने नाममा धेरै उखु सेवन गर्नु पनि हानिकारक हुन्छ।
आजको नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ : उखुमा दिनभरलाई धान्न सक्ने क्यालोरी पाइन्छ। तर उखु बढी खाएमा मोटोपना बढ्न सक्छ। यसप्रति सचेत हुनुपर्छ। मधुमेहका बिरामीले सकभर उखुक खानुहुन्न। उखुमा प्रशस्त मात्रामा पाइने सुगरले यस्ता बिरामीलाई असर गर्छ।
अघिल्लॊ काठमाडौँबाट एक वर्षमा १५ सय मानिस हराए, किन हराउँछन् मान्छे ?
पछिल्लॊ इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ८२ औं शाखा बालुवाटारमा